ကွက်ဆန်းလေးတွေ ကြောင့် ထိတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကွက်ဆန်းလေးတွေ ကြောင့် ထိတယ်
ကွက်ဆန်းလေးတွေ ကြောင့် ထိတယ်
Posted by မောင် ပေ on Jun 17, 2013 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 13 comments
ကွမ်း ပို့ စ်
ကလိန် ကလိန် ကလိန်…
“ ဟယ်လို ၊ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ၊ ညီအစ်ကိုများ ရောင်းဝယ်ရေး ကကြိုဆိုပါတယ် ”
““ ဟုတ်ကဲ့ ၊ မင်္ဂလာပါရှင် %!@#$%^ ဘဏ် က ဆက်တာပါ ၊ ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် ရှိပါသလားရှင် ””
“ ဟုတ်ကဲ့ ၊ ကျွန်တော် စိန်ပေါက်ပေါက် ကိုယ်တိုင် ပြောနေတာပါ ”
““ ကျွန်မ တို့%!@#$%^ ဘဏ် ကို ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် နာမည် နဲ့ချီးပိုးထိုးမြို့ က ဦးလျှောက်ဝူ က သိန်း၃၀ကျပ် လွှဲတာကို လာထုတ်လို့ ရပါပြီ ရှင် ””
“ အော်… အင်းအင်း ညီမလေး ၊ ကျေးဇူးပါပဲနော ၊ အစ်ကိုကြီး လာထုတ်လိုက်ပါမယ် ”
ဖုန်းချပြီးနောက် ၊ ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် သူ၏ တပည့်မလေး ဇာဇာ့ ကို ခေါ်လိုက်သည် ။
(မှတ်ချက် ။ ဇာဇာ ဆိုသည်မှာ www.myanmargazette.net မှ မည်သည့် ရွာသူမှ မဟုတ်ပါကြောင်း ၊ မရည်ညွှန်းပါကြောင်း ၊ မရည်ရွယ်ပါကြောင်း ၊ ကိုယ်စားမပြုပါကြောင်း)
“ ဇာဇာ ရေ ၊ စောနက အော်ဒါ တက်ထားတဲ့ ချီးပိုးထိုးမြို့ က ဦးလျှောက်ဝူ ဟာတွေ ထုတ်လိုက် ၊ ပြီးရင် ဘောက်ချာဖွင့်ပြီး ၊ ဆိုက်ကားနေဝန်းနီ ကို ပို့ ခိုင်းလိုက်တော့ ၊ ဟုတ်ပြီလား ”
“ ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဆရာ ၊ သမီး အခု လုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင့် ”
ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် တစ်ယောက် ၊ တစ်ယောက်ထဲ မိန့် မိန့် ကြီး ထိုင်ပြုံးနေမိသည် ။
အခု တလော အရောင်းအဝယ်က ကောင်းတာမဟုတ် ။
ကိုယ့်ရှိတဲ့ ဖောက်သည်တွေ နဲ့ ပဲ ၊ ၃ပတ်လောက် အကြွေးရောင်းပေးရင်း လုပ်စားနေရတာကိုး ။
မနက် က ဦးလျှောက်ဝူ ဆိုသူ ဖုန်းဆက်ပြီး ပစ္စည်းဈေးများမေး ၊ အမှာစာရင်း တက်လာတော့ ၊ ငွေလွှဲမှ ပစ္စည်းပို့ မည် ဟု ပြောခဲ့သည် ။
တစ်ကယ်တမ်း ၊ ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် အခုလို ဖြစ်လာမည် ဟု မထင် ။
ဖုန်းဆက်ပြီး ဈေးစုံစမ်းသူ ဟုသာ တွက်ခဲ့မိသည်ကိုး ။
အားလုံး အသင့်ဖြစ်ပြီမို့ ထင် ၊ ဆိုက်ကားနေဝန်းနီ သူ့ ဆီ ရောက်လာသည် ။
““ ဆရာ ၊ ဦးလျှောက်ဝူ ဟာ က ဘယ်ဂိတ် နဲ့ ပို့ ရမှာလဲ ””
“ ဟေ…နေဦး..နေဦး ၊ ချီးပိုးထိုး မြို့ ကို သွားတာ ဘယ်ဂိတ်တွေ ရှိလဲ ၊ ဇာဇာရေ ၊ ဘယ်ဂိတ်ရှိလဲ ကြည့်စမ်းပါဦး ”
““ ဆရာ ၊ ပြုတ်ကျဒုက္ခ ဂိတ် နဲ့ ပို့ ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ် ၊ သူက မြန်တယ် ””
“ အေးအေး… အဲဒါဆိုလဲ ၊ အဲ့ဂိတ် နဲ့ သာ ပို့ လိုက် ၊ အော်..နေဝန်းနီ ရေ ၊ ပစ္စည်းအရေအတွက် ကို သေချာ လက်ခံ ရေးခိုင်းနော် ”
““ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ၊ ပစ္စည်းက များတော့ ၂ခေါက်သွားရမှာ ခင်ဗျ ””
“ အေးအေး…အဲဒါဆိုလဲ ၂ခေါက်သွားပေါ့ ၊ လက်ခံတော့ သေချာယူခဲ့ ”
ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် အပြင်ထွက်ကြည့်တော့ ၊ နေက တော်တော်ပူနေသည် ။
“ တော်ပါပြီလေ ၊ နောက်ထပ် ငွေလွှဲထပ်ဝင်မှ ၊ ပေါင်းထုတ်တာ ကောင်းပါတယ် ”
“ ဘာ..ဘာ..ဘယ်လို ၊ ဘယ်လို ၊ ချီးပိုးထိုး မြို့ က နေ ဘာငွေလွှဲမှ မဝင်ထားဘူး ၊ ဟုတ်လား ”
““ ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ၊ ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် နာမည် နဲ့ တော့ ၊ ချီးပိုးထိုးမြို့ ကနေ ဘာငွေလွှဲမှ မရောက်ထားသေးပါဘူးရှင့် ””
“ သေချာအောင် တစ်ချက်လောက် ပြန်ကြည်ပေးပါဦးကွယ် ၊ ဦး အလုပ်ဖုန်း ၃^*&%_ ကို သမီး တို့ ဘဏ်ကနေ ဖုန်းဆက်ထားလို့၊ လာထုတ်တာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးရက် ၊ တနင်္လာနေ့မနက် ၁၀နာရီခွဲလောက်က ဆက်ထားတာပါ ”
ဘဏ်ဝန်ထမ်းမလေးများ ၊ ငွေလွှဲစာရင်း ကို အထပ်ထပ် ပြန်စစ်ပြီးသည့်နောက်
““ ဟုတ်တယ် ဦး ၊ ဦး နာမည် နဲ့ တစ်စောင်မှ မရှိပါဘူးရှင် ၊ နောက်ပြီး ဦးပြောတဲ့ ၃^*&%_ ဖုန်း ကို လဲ သမီးတို့ ဘဏ်ကနေ ဒီရက်တွေ အတွင်း လုံးဝ ဆက်ထားတာ မရှိပါဘူးရှင် ””
“ ဟင်.. ဒါဆို ၊ ဟာကွာ… တောက် ”
“ ဇာဇာ ရေ လာစမ်းပါဦး ၊ နေဝန်းနီ ကို ပါ ခေါ်လိုက် ”
““ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ””
ဇာဇာ နှင့် နေဝန်းနီ တို့ ဝင်လာကြသည် ။
“ ဒီမယ် ၊ ပြီးခဲ့ တနင်္လာနေ့ တုန်းက ၊ ဦးလျှောက်ဝူ ချီးပိုးထိုးမြို့ ဆိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို ပို့ တာ နေဝန်းနီ မို့ လား ”
““ ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ ၊ ဆရာ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ၊ ပစ္စည်း မရောက်သေးလို့ တဲ့လား ၊ မဇာဇာ ပြောတဲ့အတိုင်း ပြုတ်ကျဒုက္ခ ဂိတ် နဲ့ ပို့ ခဲ့တာပါ ၊ ကျွန်တော် ဂိတ် ကို သွားမေးပေးရမလား ခင်ဗျ ””
“ နေနေ… ပစ္စည်းကပို့ ထားရင် သေချာပေါက် ရောက်မှာ ၊ အခုဟာက ငွေလွှဲတယ် ဆိုပြီး အကြောင်းကြားရဲ့ သားနဲ့၊ ဘဏ်ကိုသွားထုတ်တော့ ၊ ဘယ်ကမှ ငွေမလွှဲထားဘူးတဲ့ ၊ ဘာတွေမှန်း မသိတော့ဘူးကွာ ၊ ဇာဇာ ငါ့ ကို အဲ့ကားဂိတ် ဖုန်းနံပါတ် ရှာပေးစမ်း ”
““ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ ””
“ ဟယ်လို ၊ ပြုတ်ကျဒုက္ခ ဂိတ်ကလားဗျ ”
““ ဟုတ်ပါတယ် ””
“ ကျွန်တော် ညီအစ်ကိုများ ရောင်းဝယ်ရေးကပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ တုန်း က ကျွန်တော်တို့ ဆီ က ပို့ တဲ့ ပစ္စည်း ချီးပိုးထိုးမြို့ ကို ရောက်သွားပြီလား ဆိုတာလေး သိချင်လို့ ပါ ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါဦးနော ”
““ အစ်ကိုရေ ၊ ညီအစ်ကိုများ ရောင်းဝယ်ရေးက ပို့ တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံး အင်္ဂါနေ့ ညနေ ပိုင်းမှာ ရောက်သွားပါပြီဗျ ””
“ အော်..ကောင်းပါပြီ ၊ ကျေးဇူးပါပဲ နော ”
ဆရာ ဘာတဲ့လဲ ဟင်
“ ပစ္စည်းတွေ က ရောက်သွားပြီတဲ့ ၊ အဲဒါ ချီးပိုးထိုးမြို့ ကို ငါကိုယ်တိုင် သွားစုံစမ်းရတော့မှာပေါ့ ”
ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် အလုပ်ကို နေ့ တစ်ဝက်ပိတ်ကာ ၊ ဆိုက်ကားနေဝန်းနီ ၊ တပည့်မလေး ဇာဇာ တို့ နှင့် ချီးပိုးထိုးမြို့ သို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။
ရာသီဥတုကပူ ၊ ရင်ထဲက သောက ကပူ နှင့်ပေါ့…
ချီးပိုးထိုး မြို့ ကို ရောက်ရောက်ချင်း ၊ ခဏတဖြုတ်မှပင် မနားနိုင်တော့ပဲ ၊ ပြုတ်ကျဒုက္ခ ဂိတ် ရှိရာ သို့ ချက်ချင်း သွားခဲ့သည် ။ ဂိတ်စာရေးထံတွင်
“ ညီလေးရေ ၊ အစ်ကိုတို့ က မန်းတလေး က ညီအစ်ကိုများရောင်းဝယ်ရေး ကပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ တုန်းက အစ်ကို့ ဆီ ကနေ ၊ ဦးလျှောက်ဝူ နာမည်နဲ့ပို့ လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို ဘယ်သူ လာသယ်သွားလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါလား ”
အင်္ဂါနေ့ က ရောက်တာဗျ ၊ တန်ဆာခ ရှင်းတော့ ၅ထောင်တန် အသစ်လေးတွေ နဲ့ ရှင်းသွားတာ ။ ကျုပ်တို့ ဆီ က ကုန်တင်ကုန်ချကောင်လေးတွေ ကို မေးပေးပါမယ် ။ ဟေ့…မောင်ဘ တို့ ရေ ၊ ဒီက အစ်ကိုကြီးတွေ ဆီကို ခဏလာကြစမ်းပါဦး ….
ဟောဒီ က အစ်ကိုကြီး က မန်းတလေးကတဲ့ ၊ အင်္ဂါနေ့ တုန်း က ရောက်တဲ့ ဦးလျှောက်ဝူ ပစ္စည်းတွေ ကို ဘယ်သူလာသယ်သွားလဲ .. အဲဒါ မင်းတို့ သိကြလား
အဲ့နေ့ က ည၆နာရီ ဂိုထောင်ပိတ်ချိန်မှ လာသယ်သွားတာဗျ ၊ လိုက်ထရပ် ကားနဲ့ ပဲ ၊ အဲ.. လူတွေ က တော့ ဘယ်ကလဲ မသိဘူး ၊ ဒီမြို့ ကတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ကျုပ်တို့ တောင် အံ့သြနေသေးတယ် ။ လူစိမ်းတွေမို့ ၊ ကျုပ်တို့ မြို့ က ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတော့ ၊ ဒီမြို့ ထဲက ဆိုရင် တန်းသိတယ် ။
“ အဲဒီ လိုက်ထရပ် ကားနံပါတ်ကော မှတ်လိုက်သေးလား ”
မှောင်စပျိုးနေတာရယ် ၊ ပစ္စည်းတွေ တင်ပေးရတာ ရယ်နဲ့၊ ကားနံပါတ်ကို မှတ်ဖို့ သတိ မရ လိုက်ဘူး ။ ကားကတော့ အဖြူရောင်ပဲ ၊ နောက်အမိုးကိုင်း မတပ်ထားဘူးရယ် ၊ ကျုပ်တို့ အလုပ်သမားတွေကိုတောင် လဘက်ရည်ဖိုးဆိုပြီး ၅ထောင်တန် တစ်ရွက်ပေးသွားသေးတယ် ။
“ သွားပါပြီကွာ … တောက် ”
အစ်ကို ကလဲ ၊ သူ့ ဖုန်းနံပါတ် အစ်ကို တို့ ဆီ မရှိဘူးလားဗျ
“ သူ ပစ္စည်းမှာတော့ ၊ ငွေလွှဲလိုက်ပြီ ဖုန်းဆက်တော့ ၊ အစ်ကို့ အလုပ်ဖုန်း ကို ဆက်တာလေ ၊ အစ်ကို့ အလုပ်ဖုန်းက ၃ အစ ဆိုတော့ ၊ ဝင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ် ကို မှတ်မရဘူး ။ နောက်ပြီး ခပ်တည်တည် နဲ့%!@#$%^ဘဏ်ကလိုလို နဲ့ က ငွေလွှဲဝင်ပြီ ထုတ်လို့ ရပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ ထပ်ဆက်လာတော့ ၊ သေချာတယ်မှတ်ပြီး ပို့ လိုက်မိတာပါ ။ အခု ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး ။ ”
“ အကြွေးရောင်းရင် ကြာလွန်းလို့ ကို ၊ သူစိမ်းဆိုရင် ဘယ်သူ့ မှ ရောင်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးရယ် ၊ အခုဟာ က ငွေကြိုလွှဲလို့ပစ္စည်းပို့ လိုက်မိပါတယ် ။ သွားပါပြီကွာ ”
အစ်ကို တို့ ဘက် က လိုတာရှိသွားတယ်ဗျ ၊ အမှန်အတိုင်းဆိုရင် သူစိမ်းနဲ့ အလုပ် လုပ်မယ် ဆိုရင် ၊ သူ့ ရာဇဝင် ၊ နေရပ်လိပ်စာ ကို အတိအကျ မသိပဲနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးဗျ ။
အခုပုံစံအတိုင်း ဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်ရေး ကို သွားပြီး ဖုန်းအဝင် ကို စစ်ရင်လဲ ၊ လမ်းဘေး ပီစီအို တွေနဲ့ ပဲ ညားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရဲစခန်းကိုတော့ ဝင်အကျိုးအကြောင်း ပြောပြီး အမှုဖွင့်ထားလိုက်ပါ အစ်ကိုရာ ။
ဦးစိန်ပေါက်ပေါက် လဲ ဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်တော့ ။
တပည့်မ ဇာဇာ နဲ့ဆိုက်ကားနေဝန်းနီ တို့ ခဗျာလဲ ၊ သူရို့ ဆရာမျက်နှာကို ကြည့်ရင်း စိတ်မကောင်း ။
******* ပြီးပါပြီ *******
( ဦးပေါက် နဲ့ဘိုနီ ရေ ၊ ခြစ်လို့ ပါနော ဟီ ဟိ )
ခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ လုပ်စားသွားတာ… ပီပါ့ဗျာ…
ကျောက်စ် က ကုန်သည်မဟုတ်တော့ ဒါမျိုးအခုမှကြားဖူးတယ်…
လူလိမ်ဆိုတာ ဂျိုမပါ အသံမကွဲတော့ အခက်သားလား…
အဲ့ ဇာဇာကို ခိုင်းလို့ နေမှာ။
ဒီ က ဇာဇာ တစ်ယောက်လုံး ရှိသားနဲ့။
ဆိုက်ကား ကပေလည်း ရှိသေးတာကို။
ဆိုက်ကားနင်းတာ ကိုနေဝန်းနီ ဗျ
သူ လဲ လူပျိုကြီး
ကျုပ် ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး
အွန်လိုင်းမှာ အဟွာရှာတဲ့ အထဲ ကျုပ်မပါပါဘူး။
စကားကို ဆင်ခြင်ပြောပါ ဟဲ့။
ဒီ ကပေက ကျုပ်နဲ့ ရန်သူဖြစ်ချင်သလား:::
မန်းလေးတစ်ခါပြန်လာပြီး မုန့်လိုက်ကျွေးတာလေး စားပါရစေဦး:::
ပြီးမှ ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့ နော့။
ဒီအကွက်နဲ့ ကပေကြီးကို နှပ်အုံးမှ …
ကပေ့နှပ်လို့မရဘူး…ကပေက ဒါမျိုးလုပ်စားလာတာ ထိပ်ပြောင်နေပြီ…ခွေးချေးကပေဆိုပြီး နာမယ်ကြီးနေတာ နင်တိဘူးလား သဂျိုးရဲ့
ခွေးချေးစားနေတဲ့ ခလေးမ ဓါတ်ပုံ တင်ပေးလိုက်ရလို့ 
ညှင်း ညှင်း ညှင်း ညှင်း
ပွေး ပွေး ပွေး ပွေး
ဟိစ်စ်.. အဲဒီအူးလျှောက်ဝူက ကိုပေတော့မဟုတ်ဘူးမလား
Bank နာမည် အဆန်းးးနော့
အဲ့လို အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီး လုပ်နေသူဆို ရှိတဲ့ဘဏ်တိုင်းမှာ အကောင့်ဖွင့်ထား.. ငွှေလွှဲသမျှ အဲဒီအကောင့်တွေထဲ တိုက်ရိုက်ထည့်ခိုင်းသင့်တယ် မှတ်တာပဲ…။